एक तस्बिरलाई नि: शुल्क PDF मा रूपान्तरण गर्नुहोस्: उत्तम वेब पृष्ठहरु | मोबाइल फोरम
एक तस्बिरलाई PDF मा नि: शुल्क रूपान्तरण गर्नुहोस्: उत्तम वेब पृष्ठहरु
डेनियल टेरासा | 03/10/2021 12:00 | कार्यक्रमहरू
दुबै कम्प्यूटर मा र हाम्रो मोबाइल फोन मा त्यहाँ धेरै छविहरु छन् कि हामी हेर्न, डाउनलोड वा हरेक दिन पठाउन सक्छौं। यस पोष्ट मा हामी वेबसाइटहरु र अनुप्रयोगहरु को विश्लेषण गर्न को लागी जाँदैछौं कि हामी हाम्रो निपटान मा छ को कार्य निष्पादित गर्न को लागी फोटो PDF मा रूपान्तरण गर्नुहोस्.
यस प्रकार को रूपान्तरण को उद्देश्य के हो? सामान्यतया हामी एक एक JPG, PNG वा GIF छवि ढाँचा बाट जान्छौं पीडीएफ मुद्रण को समयमा। यो पनी सम्भव छ कि हामी यो गर्न को लागी जब आधिकारिक कागजात को केहि प्रकार को वितरण (सबैभन्दा सामान्यतया स्वीकार गरीएको ढाँचा .pdf हो)। यी र अन्य कारणहरु को लागी, हामी जान्न रुचि राख्दछ कि के तरीकाहरु फोटो लाई PDF मा रूपान्तरण गर्न को लागी अवस्थित छ।
यहाँ तीन फरक तरीका बाट फोटोहरु लाई PDF मा रूपान्तरण गर्न को लागी छन्: हाम्रो कम्प्यूटर मा स्थापित प्रोग्रामहरु बाट, वेबसाइटहरु को माध्यम बाट वा मोबाइल फोन को लागी अनुप्रयोगहरु को उपयोग गरेर। र यी तीन परिमार्जन को प्रत्येक को लागी हामी तपाइँलाई केहि विकल्पहरु प्रस्तुत गर्दछौं। त्यसोभए तपाइँ एक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको आवश्यकताहरु लाई सबै भन्दा राम्रो सूट गर्दछ।
1 कार्यक्रम PDF मा फोटो रूपान्तरण गर्न
1.1 Altarsoft पीडीएफ कनवर्टर
1.2 आइसक्रीम पीडीएफ कनवर्टर
1.3 JPG पीडीएफ कनवर्टर गर्न
1.4 TalkHelper पीडीएफ कनवर्टर
2 पीडीएफ रूपान्तरण को लागी अनलाइन छवि को लागी वेबसाइटहरु
2.3 छवि PDF कन्भर्टरमा
3 मोबाइल एप्स
3.2 माइक्रोसफ्ट अफिस लेन्स
कार्यक्रम PDF मा फोटो रूपान्तरण गर्न
त्यहाँ छन् दुई कारणहरू हाम्रो कम्प्यूटर मा सफ्टवेयर को यस प्रकार को स्थापित गर्न को लागी स्पष्ट। पहिलो हो सान्त्वना: यदि हामी धेरै रूपान्तरण गर्न को लागी बाहिर जाँदैछौं, यो सबैभन्दा सुविधाजनक छ। दोस्रो, तर कम्तीमा होइन, को प्रश्न हो गोपनीयता। यी कार्यक्रमहरु संग कागजात कम्प्यूटर भित्र सबै समय रहन्छ। यी सबै भन्दा धेरै प्रयोग गरिन्छ:
Altarsoft पीडीएफ कनवर्टर
Altarsoft पीडीएफ कनवर्टर, सरल र प्रभावकारी
यो यसको पछाडि धेरै बर्षहरु संग एक साधारण सफ्टवेयर हो, तर यो तपाइँ आफ्नो प्रकार को एक कनवर्टर बाट अपेक्षा गर्नुहुने सबै कुरा गर्दछ। Altarsoft पीडीएफ कनवर्टर यो बिल्कुल स्वतन्त्र छ र प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ, यद्यपि यो पनी केहि सीमाहरु छन्। उदाहरण को लागी, यो मात्र तपाइँ एक समय मा एक छवि रूपान्तरण गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। यदि हामी धेरै फाइलहरु संग काम गर्न को लागी यो धेरै व्यावहारिक छैन।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: Altarsoft पीडीएफ कनवर्टर
छिटो र धेरै प्रयोग गर्न सजिलो। संग आइसक्रीम पीडीएफ कनवर्टर छविहरु को ठूलो संख्या ड्र्याग र ड्रप द्वारा मात्र रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। कार्यक्रम पनि रोचक गोपनीयता विकल्प छ।
यो भनिएको छ कि परीक्षण संस्करण निश्चित सीमाहरु लाई स्थापित गर्दछ: पीडीएफ कागजात प्रति5पृष्ठहरु र रूपान्तरण प्रति3फाइलहरु। यी बाधाहरु लाई समाप्त गर्न को लागी कुनै विकल्प छैन तर सशुल्क संस्करण प्राप्त गर्न को लागी।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: आइसक्रीम पीडीएफ कनवर्टर
JPG पीडीएफ कनवर्टर गर्न
एक उपयोगी र सीधा विकल्प। एक सरल, लगभग संयमी इन्टरफेस संग, JPG पीडीएफ कनवर्टर गर्न यो पीडीएफ फोटो रूपान्तरण को कार्य को लागी एक रोचक उपकरण को रूप मा हामीलाई प्रस्ताव गरीएको छ। यसबाहेक, अन्य चीजहरु को बीच मा, यो हामीलाई0बाट 100%सम्म जान्छ कि एक दायरा मा छवि गुणस्तर चयन गर्न अनुमति दिन्छ। निस्सन्देह, नि: शुल्क परीक्षण संस्करण मात्र १५ दिन को लागी उपलब्ध छ। यस समय पछि, तपाइँ यो सफ्टवेयर को उपयोग जारी राख्न को लागी एक भुक्तानी मा जानु पर्छ।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: JPG पीडीएफ कनवर्टर गर्न
TalkHelper पीडीएफ कनवर्टर
एक धेरै धेरै उपयोगी कार्यक्रम PDF मा छविहरु लाई रूपान्तरण गर्न को लागी, यद्यपि हामी केवल यसको परीक्षण संस्करण मा नि: शुल्क विकल्प पाउनेछौं। यो हामीलाई १० पृष्ठहरु को एक अधिकतम संग परिणाम रूपान्तरण प्रदान गर्दछ र परिणाम वाटरमार्क छन्।
सबै मा, को उपयोगिता TalkHelper पीडीएफ कनवर्टर प्रश्न बाहिर छ: यसले तपाइँलाई छिटो छवि फाइलहरु (JPG, PNG, TIFF, BMP र GIF) लाई PDF मा रूपान्तरण गर्न को लागी अनुमति दिन्छ र PDF, Word, Excel, PPT र DWG फाइलहरु लाई रूपान्तरण गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: TalkHelper पीडीएफ कनवर्टर
पीडीएफ रूपान्तरण को लागी अनलाइन छवि को लागी वेबसाइटहरु
यो मोडालिटी धेरै अघिल्लो हो जुन हामी अघिल्लो सेक्सन मा देखाइएको भन्दा धेरै चुस्त छ। रूपान्तरणहरु गरिएका छन् अनलाइन, एक सरल र छिटो तरीका मा, प्रोग्राम स्थापना गर्न आवश्यक छैन कि हाम्रो उपकरणहरु मा मेमोरी कब्जा।
मात्र नकारात्मक पक्ष हो कि हाम्रा कागजातहरु को गोपनीयता कम्प्यूटर आक्रमण को घटना मा सम्झौता गर्न सकिन्छ। यसले यी वेबसाइटहरु लाई पेशेवर वातावरण मा प्रयोग को लागी अयोग्य बनाउँछ। जे होस्, यदि सामग्री विशेष गरी संवेदनशील छैन, निम्न साइटहरु मध्ये कुनै एक राम्रो विकल्प हो।
Docupub संग तपाइँ कुनै पनी ईमेल मा PDF मा छविहरु को एक डाउनलोड लिंक पठाउन सक्नुहुन्छ
पीडीएफ को माध्यम बाट फोटो रूपान्तरण को प्रक्रिया DOCUPUB यो साँच्चै सरल छ। यस पृष्ठ को माध्यम बाट हामी पीएनजी र JPEG ढाँचा मा दुबै छविहरु लाई PDF मा तीन चरणहरुमा रूपान्तरण गर्न सक्छौं: पहिले हामीले एक्रोब्याट को संस्करण जसको साथ हामी यो मिल्दो हुन चाहन्छौं चयन गर्नुपर्छ, तब हामी हाम्रा फाइलहरु मा फाइल पत्ता लगाउने (२ MB MB सम्म) ) र अन्तमा हामी ढुवानी विधि चयन गर्नुहोस्।
हो, ढुवानी विधि। र यो विशेषता हो कि यो कनवर्टर बाकी बाट फरक बनाउँछ: हामी कुनै पनि ईमेल मा डाउनलोड लिंक पठाउन सक्छौं।
यो वेबसाइट एक साथ धेरै कार्यहरु र पीडीएफ कागजात को व्यापक प्रबंधन को लागी विचारहरु लाई ल्याउँछ। निस्सन्देह, यो पनि अन्य ढाँचाहरु (छविहरु को लागी) को लागी एक फाइल कनवर्टर शामिल छ। यसैले यो जोड्न को लागी उचित छ HiPDF हाम्रो सूचीमा।
नि: शुल्क संस्करण पक्कै केहि सीमाहरु छन्। उदाहरण को लागी, तपाइँ मात्र दिन मा दुई पटक वेब को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, १०MB सम्म फाईलहरु संग र प्रति फाइल ५० पृष्ठहरु को अधिकतम संग। तर यो धेरै राम्रो संग काम गर्दछ।
पीएमएफ कनवर्टर को लागी img
यो पहिलो वेबसाइटहरु हो कि रूपान्तरण को यस प्रकार को प्रदर्शन गर्न को लागी देखाईएको हो, तर यसको बावजूद यो अझै पनी सबैभन्दा राम्रो मध्ये एक हो। सायद यसको ईन्टरफेस सबैभन्दा आकर्षक छैन, तर यो यो गर्न को रूप मा काम गर्दछ: संग छवि PDF कन्भर्टरमा सबैभन्दा सामान्य छवि ढाँचा PDF मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। सबै भन्दा राम्रो: यो कसरी पीडीएफ रूपान्तरण भन्दा पहिले देखिनेछ जाँच गर्न को लागी एक पूर्वावलोकन प्रदान गर्दछ। निस्सन्देह, तपाइँ मैन्युअल रूपले कार्य गर्न को लागी, फाइल द्वारा फाइल। ब्याचमा काम गर्न असम्भव छ।
लिङ्क: छवि PDF कन्भर्टरमा
Smallpdf को उपयोग गरी सुरक्षा र गोपनीयता को एक प्लस
यसको कार्यक्षमता को लागी भन्दा धेरै, हामी एक बाध्यकारी कारण को लागी पीडीएफ मा फोटो कन्वर्ट गर्न को लागी विकल्पहरु को हाम्रो सूची मा यो वेबसाइट लाई जोड्नु पर्छ: यो गोपनीयता को समस्या को लागी एक प्रभावी समाधान सम्मिलित गर्ने केहि मध्ये एक हो। र Smallpdf यो एक साधारण विधि पछ्याएर यो गर्दछ: एक लागू SSL ईन्क्रिप्शन को उपयोग गरी एन्क्रिप्शन सबै फाइलहरु लाई। एक घण्टा वेब मा अपलोड पछि, यी स्वचालित रूप बाट मेटिन्छन्।
Smallpdf सेवाहरु 14 दिन को लागी एक नि: शुल्क परीक्षण अवधि मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अन्तमा, हामी उपकरण को अर्को मोडलिटी अन्वेषण गर्न को लागी फोटो लाई PDF मा रूपान्तरण गर्न को लागी छ। विशेष गरी, मोबाइल फोन अनुप्रयोगहरु। यी अनुप्रयोगहरु अधिक र अधिक प्रयोग र डाउनलोड गरीएको छ, किनकि अधिक र अधिक हामी सबै अधिक चीजहरु को लागी हाम्रो स्मार्टफोन को उपयोग गर्दछौं। तपाइँलाई थाहा छ, मोबाइल फोन एउटा सानो कम्प्यूटर जस्तै हो कि हामी हाम्रो पकेट मा बोक्छौं।
धेरै अन्य क्षेत्रहरु को रूप मा, नयाँ कार्यहरु र संभावनाहरु संग नयाँ अनुप्रयोगहरु लगातार देखा पर्दा जब यो छवि स्क्यानि and र रूपान्तरण को लागी आउँछ। यो पल मा सबै भन्दा राम्रो हो:
Evernote स्क्यान योग्य, आईफोन को लागी मात्र उपलब्ध छ
यो अनुप्रयोगले हामीलाई तुरुन्तै छविहरु को सबै प्रकार को स्क्यान गर्न को लागी, व्यापार कार्ड वा रसिदहरु बाट, चित्र र तस्वीरहरु लाई अनुमति दिन्छ। यो संग्रह र छविहरु को स्वचालित संगठन र पीडीएफ मा उनीहरुको परिणामस्वरूप रूपान्तरण को एक प्रणाली संग काम गर्दछ। अहिलेको लागी Evernote Scanable को प्रयोगकर्ताहरु को लागी मात्र उपलब्ध छ आईफोन र आईप्याड
लिङ्क: Evernote Scanable
एक सरल तर प्रभावकारी स्क्यानर जसको साथ कागजातहरु को सबै प्रकार को स्क्यान र उनीहरुलाई PDF मा रूपान्तरण गर्न को लागी। आईफोन प्रयोगकर्ताहरु को लागी मात्र उपलब्ध छ। संग माइक्रोसफ्ट अफिस लेन्स रूपान्तरण परिणाम एक नोट वा एक ड्राइभ मा भण्डारण गर्न सकिन्छ। यसको अतिरिक्त, यो साधारण उपकरणहरु संग छविहरु सम्पादन को संभावना प्रदान गर्दछ।
लिङ्क: माइक्रोसफ्ट अफिस लेन्स
PDFElement, PDF मा छविहरु रूपान्तरण को लागी सबै भन्दा राम्रो आवेदन
सम्भवतः मोबाइल अनुप्रयोगहरु को सबै भन्दा राम्रो जब यो PDF मा छविहरु लाई रूपान्तरण गर्न को लागी आउँछ। र यो हो कि, PDFElement यो मात्र रूपान्तरण प्रक्रिया को ख्याल राख्दैन, यो पनी पढ्न र हाम्रो पीडीएफ कागजात सम्पादन संग मद्दत गर्दछ।
यस बाहेक, यो अनुप्रयोग तपाइँ सजीलै एक एकल खाता हो कि हामीलाई विन्डोज, macOS X, आईओएस र एन्ड्रोइड को लागी सेवा गर्नेछ क्लाउड मा एक पीडीएफ कागजात साझा गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। अन्य फाइदाहरु को बीच, PDFElement धेरै भाषाहरु मा उपलब्ध छ र प्रयोगकर्ता र मालिक पासवर्ड संग पीडीएफ फाइलहरु एन्क्रिप्ट गर्न को लागी विशेष सफ्टवेयर शामिल छ।
Scanbot संग PDF मा फोटो रूपान्तरण
अघिल्लो विकल्प जस्तै, यो एक स्क्यानर हो, तर यो पनी PDF मा छविहरु रूपान्तरण को कार्य को लागी उपयोगी छ। स्क्यानबोट यो यसको सटीक र उच्च गुणस्तर को लागी सबै भन्दा माथि खडा छ। यो पनि प्रयोग गर्न को लागी धेरै सजिलो छ: पहिले तपाइँ छवि मा फोन को क्यामेरा बिन्दु छ र प्रक्रिया स्वचालित रूप बाट शुरू हुन्छ। पछि, हामी स्क्यान फसल र हाम्रो मनपर्ने यो सम्पादन गर्न को लागी विकल्प छ। यस को लागी, Scanbot रंग, चमक र कन्ट्रास्ट को चार किस्महरु छन्।
तपाइँको हात मा एक महान उपकरण हो कि महान लोकप्रियता (२० मिलियन भन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ताहरु लाई विश्वव्यापी) को आनन्द लिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » कार्यक्रमहरू » एक तस्बिरलाई PDF मा नि: शुल्क रूपान्तरण गर्नुहोस्: उत्तम वेब पृष्ठहरु
उपकरण पट्टी शब्द मा गायब भएको छ, म के गर्छु?
कसरी शब्द को लागी अतिरिक्त फन्टहरु जोड्ने